Dalka Sweden oo ka digay dhammaan safarrada ay ku socdaalayaan. – Xogsoor News Network
Midowga Afrika oo kahadlay xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya
Xildhibaanadii somali kenyanka ahaa ee tegay Xamar oo go’aan laga gaaray
Askar katirsan Ciidamada Maamulka Somaliland oo dil loogu geystey deegaanka.
DHAGAYSO:-Kenya oo burburisay xarunta shirkadda Hormuud ee Magaalada
Xidhiidhka Gubadda Kolayga iyo Dr Cali Cisman Cali Oo Munaasabad Galabta Ku Qabtay Muqdisho(Sawiro)
Wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden ayaa soo saartay bayaan ay kaga digeeyso in laga baaqdo safarrada laga maarmo ee dhammaan dalka dibaddiisa loogu socdaaleyo.
Tallaabadan ayaa ka dambeeysa sidii looga hor tegi lahaa faafidda caabuqa korona iyo xaaladda degdegga isku bedelaysa ee caalamka ka aloosan. 24 kii saac ee u dambeeyey oo ey waddammo badani ku tallaabsadeen amarro degdeg ah sidii loo dhimi lahaa faafidda caabuqa corona iyo sugnaan la’aanta gaadiidka safarrada ee dayuurradaha intaba.
Go’aankan ayaa la gaaray sabtida maanta, sida uu sheegay Gunnar Vrang waxaa uuna socon doonaa muddo bil ah illaa iyo 14-ka bisha abriil, wixii muddadaa ka dambeeyna la qiimeeyn doono si war looga soo saaro.
Dhammaan dadka dibadda ku sugan waxaa lagula talinayaa inay xaaladdooda qiimeeyaan. Waxaa dhici karta inay ku wanaagsanaan lahayd inay ku sugnaadaan goobaha ey iminkaba joogaan inta xaaladda dayuurraduhu wax iska bedeleyaan oo dib ugu soo laaban doonaan sidii caadiga ahayd. Arrimmahan ayaa caqabado keeni kara, waxaannuna bulshada ka codsaneynaa inay nala dareento oo dulqaad noogu yeelato. Waa xaalad aan horay loo arag, sida uu sheegay Gunnar Vrang.